Than Lwin Editor – Page9– Than Lwin
Than Lwin Editor (Page 9)
လယျယာမွနှေငျ့ပါတျသကျသော မူဝါဒ နှငျ့ ဥပဒမြေား အပျေါ ဝဖေနျသုံးသပျအကွံပွု(ပထမ အကွိမျ) ဆှေးနှေးပှဲ
(၂၄. ၁၀. ၂၀၁၆ )ရကျနေ့ သံလှငျ (နိုငျငံသားစှမျးရညျမွှငျ့)အဖှဲ့ကစီစဉျသော လကျရှိ (၂၀၁၆) အမြိုးသားမွအေသုံးခမြှု မူဝါဒ၊ (၂၀၁၂) လယျယာမွေ ဥပဒေ၊ (၁၈၉၄) မွသေိမျးဥပဒတှေကေို ဝဖေနျသုံးသပျ၊ အကွံပွု ဆှေးနှေးပှဲကို အလုံလမျးက My Garden Restaurant မှာပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။ ယငျးဆှေးနှေးပှဲတှငျ အဓိက ဦးဆောငျသူမြားအဖွဈ ဆရာဦးဇျောမငျး (နတျ မောကျ)၊ ဆရာဦးမောငျမောငျညှနျ့၊ ဦးငွိမျးဇာနညျနိုငျ(LCG)တို့က ဦးဆောငျဆှေးနှေးပွီး၊ မွယောအရေးဆောငျရှကျ နသေော နိုငျငံတကာနှငျ့ပွညျတှငျး NGO မြား၊ အရပျဖကျ အဖှဲ့စညျးမြားမှ ကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ လယျယာမွေ ဥပဒေ အကြိုးဆောငျရှနေ့မြေား၊ တသီးပုဂ်ဂလမြားတကျရောကျပွီးဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။Read More →
လယျယာမွနှေငျ့ပါတျသကျသော မူဝါဒ နှငျ့ ဥပဒမြေား အပျေါ ဝဖေနျသုံးသပျအကွံပွု(ဒုတိယ အကွိမျ) ဆှေးနှေးပှဲ
( ၃.၁၁.၂၀၁၆) ရကျနေ့၊ My Garden Restaurant တှငျ သံလှငျအဖှဲ့က စီစဉျသညျ့ လယျယာမွေ နှငျ့ပတျသကျသော မူဝါဒနှငျ့ ဥပဒမြေားအပျေါ ဝဖေနျသုံးသပျ အကွံပွုသညျ့ ဆှေးနှေးပှဲ (ဒုတိယအကွိမျ)ကို ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ။အဓိကဆှေးနှေးပှဲခေါငျးစဉျမှာ “မွလှေတျ၊ မွလေပျနှငျ့ မွရေိုငျးမြား စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ” ကိုဝဖေနျသုံးသပျခွငျးဖွဈသညျ။Read More →
With 133 Comments
အမည်ရင်း – နေမျိုးကျော်
အနုပညာ/Bloggerအမည်- နေဘုန်းလတ် (Nay Phone Latt) မွေးသက္ကရာဇ် – ၂၈-၀၆-၁၉၈၀ (စနေ) မိဘအမည် – ဦးသိန်းထွန်း + ဒေါ်အေးအေးသန်း
မွေးချင်း – ညီအစ်ကိုသုံးယောက်မှာ အလတ်
ဇာတိ – ရန်ကုန်
ပညာအရည်အချင်း – BE (CIVIL) ၈တန်းကျောင်းသားဘဝလောက်မှစ၍ … နွေလေ ကလောင်အမည်ဖြင့် ကဗျာများ၊ စာတိုပေစများကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပြီး … သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဒြပ်မဲ့ကမ္ဘာ၊ စိတ်ကူးကိုယ်ထည် စသည့် ကဗျာစာအုပ်များ အပျော်တမ်းထုတ်ဝေဖူးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ နေဘုန်းလတ် ကလောင်အမည်ဖြင့် စံပယ်ဖြူ၊ မိုး၊ ချယ်ရီ၊ နွယ်နီ၊ ရယ်စရာ(ယခု ပြုံးစရာ) စသည့် မဂ္ဂဇင်းများတွင် အတွေးဆောင်းပါးများ စတင်ရေးသားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဝတ္ထုတိုများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ၊ အက်ဆေးများ ဆက်လက်ရေးသားခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် နေမျိုး(သံလွင်) အမည်ဖြင့် သံလွင်အိပ်မက် အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်ဖြစ် လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ” ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်” အမည်ဖြင့် ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖန်တီးခဲ့ပြီး ရသစာပေများကို ခံစားရေးဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။ ဘုန်းဦးမော် ဟူသည့် ကလောင်အမည်ဖြင့်လည်း ဖူးငုံ(Teen) မဂ္ဂဇင်းတွင် ဝတ္ထုတိုများရေးသားခဲ့သူဖြစ် သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် နိုင်ငံရေးပုဒ်မများဖြင့် ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ် (၂၀) နှင့် (၆) လချမှတ် ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အင်းစိန်ထောင်နှင့် ဘားအံထောင်များတွင် (၄)နှစ်နီးပါး ထိမ်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက် ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလတွင် ပြန် လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ အကျဉ်းချခံထားရစဉ်အတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် RSF (ReportersRead More →